Tracy Morgan akaonekwa Chitatu masikati achiiswa mavhiri mukati chitsva Chipatara cheYork City ... uye TMZ yakadzidza kuti anogona kunge asiri kukanda chigaro chero nguva munguva pfupi.
Morgan achiri kupora kubva kune inotyisa kuparara kwemotokari kumashure muna Chikumi apo rori yeWalmart yakabatana nevhavha yake. Masosi padhuze naTracy anotaurira TMZ ... kukuvara kwaMorgan kunobva mukuparara ikoko kunogona kudzivirira iye kubva paakambofamba zvakare asina rumwe rubatsiro.
Morgan anga ari kupesana pachena neWalmart mushure mekunge yati mune zvinyorwa zvepamutemo kukuvara kwake kwaikonzerwa muchikamu chekuti anga asina kusunga bhandi rake rekugara.
Morgan akapindura achiti, "Ini neshamwari dzangu hapana zvataikanganisa."
[btn link = "http://www.tmz.com/2014/10/01/tracy-morgan-wiricheya-video-car-crash-walmart /? utm_source = twitterfeed & utm_medium = twitter "target =" _ blank "] Verenga Nyaya Yakazara [/ btn]